အစိုးရ အဖွဲ့လုပ်ငန်းများ ပိုမို ထိရောက်အောင်မြင်မှု ရှိနိုင်ရန် ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခု တိုးချဲ့ဖ - Yangon Media Group
အစိုးရ အဖွဲ့လုပ်ငန်းများ ပိုမို ထိရောက်အောင်မြင်မှု ရှိနိုင်ရန် ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခု တိုးချဲ့ဖ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝ
ပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမည်ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုတိုး ချဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအဖြစ် ဦးသောင်းထွန်းနှင့်ဦး ကျော်တင်ကိုခန့်အပ်ရန် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်တင်ပြမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အမျိုးသား လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဦးသောင်းထွန်းကိုပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်ဦးကျော်တင်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖြစ်လည်း ကောင်း ခန့်အပ်ရန်တင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက် ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံပေးပို့ထားသည့် ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးနှစ်ဦးခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လိုခြင်းတင်ပြမှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုထိရောက် အောင်မြင်မှုရှိနိုင်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များဆက်စပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ တွင်ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုဖြည့်စွက်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ရေးပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်၏သဘောတူညီချက်ရယူ ပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏သဝဏ်လွှာတွင်ဖော်ပြထားကြောင်း လွှတ်တော်နာယကမှ ပြောသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်စားတာ ဝန်ပေးအပ်ထားသည့်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးက”ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းလိုတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်။ ပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များနဲ့စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်သူ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ထံတင်ပြ၍ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စု၏အုပ်ချုပ် မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များအပါအဝင်များပြားသည့်လုပ်ငန်းတာ ဝန်များကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအား တာဝန်ခံမည့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးကိုခန့်အပ်၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက် စေမည်ဆိုပါက ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် ယင်းဝန် ကြီးဌာနကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
အဆိုပါပြည်ထောင်စုအစိုး အဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံဝန်ထမ်းအင်အားဖြင့်ပင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေပိုမိုကုန်ကျမည်မဟုတ် ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က ထပ်လောင်းပြောသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့စည်း ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်း ပြည် ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က” မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စရပ် များတွင် တက်ြ<ွကစွာပါဝင်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ရာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရန်နှင့်နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံရေးရှုထောင့်အပြင်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှု ထောင့်မှလည်းပိုမိုသုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံ တော်သမ္မတအားတာဝန်ခံဆောင်ရွက်မည့်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလိုအပ်လာသည့်အတွက် ဒီဝန်ကြီးဌာ နကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
ဖော်ပြပါဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းဝန်ထမ်းများထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းမပြုဘဲ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စီးပွားရေးဦးစီးဌာန၏ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်း မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလုပ် ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင် လျက်ရှိရာ အချို့သောနိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးများတွင်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်ပြီး အချို့သော နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများတွင် ယခုဖွဲ့စည်းမည့်အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကတက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ကဆိုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ရုံး ဌာနကိုလည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနအဆောက်အအုံတွင်ပင်ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုနီး ကပ်စွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနကလက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ယခုဖွဲ့မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပိုမိုအဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုလည်းဆိုသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးခြင်း၊သက်ဆိုင်ရာက ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ် ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက ခန့်အပ်ရန်သဘောတူကြောင်း ကြေ ညာခြင်း(သို့မဟုတ်) ကန့်ကွက်လိုသူရှိပါက ကန့်ကွက်ကြောင်းအ ဆိုတင်သွင်းခြင်းကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အခြေခံပညာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို လုံးဝ မရိုက်နှက်ရန်နှင့် ထိုင်ထ အပြစ်ပေးခြင်းကို အ?
စည်းကမ်းနှင့် မညီ အသားထုတ်ခြင်းကြောင့် နွားပွဲဈေးများတွင် အရောင်းအဝယ် ကြီးမားနေပြီး တောင
မြောက်ဦးဖြစ်စဉ်တွင် သေဆုံးသွားသူ ခုနစ်ဦးအတွက် အစိုးရ၏ထောက်ပံ့ငွေ လက်မခံဘဲ ပြန်ပေး
ဂျနီဖာလိုပက်ဇ် ပါဝင်သည့် ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ အဆုံး သတ်တော့မည်
မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်း၌ ကုန်တင်ယာဉ်နှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်ပြီး မီးလောင် ယာဉ်မေ??
”ငါ ဆုရရမယ် ဆိုတာထက် ငါစင်ပေါ်မှာ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ချပြမယ်ဆိ??